Wariye C/casiis Koronto iyo dad kale oo dacwadooda dib loo dhigay | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Wariye C/casiis Koronto iyo dad kale oo dacwadooda dib loo dhigay
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta dib u dhigtay dacwadda loo haysto Wariye Cabdicasiis Koronto iyo Afar qof kale oo ku eedeysan inay ka been abuureen ciidamada dowladda, kuwasoo ay ku jiraan haweeney sheegtay inay kufsadeen ciidamada dowladda iyo sayga qaba.
Xeer-ilaaliyaha maxakmadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in dacwadda dib loo dhigay illaa maalinta Talaadada ah oo ku beegan 5 bisha, kaddib markii la waayay markhaatiyaal ku filan, dibna loo dhigay illaa shanta bishan.
Dacwad-oogaha ayaa sheegay in wariye C/casiis uu faafiyay warar been ah, sidoo kale haweeneyda la kufsaday ayuu sheegay inay been abuur sameysay inkastoo haweeneyda ay ku adkeysanayso in la fara-xumeeyay.
Sidoo kale ninka qaba haweeneyda ku doodeysa in la kufsaday iyo laba qof oo iyagana la sheegay inay ku lug leeyihiin dacwadda ayaa lagu oogay inay ku dhiirri-geliyeen haweeneyda inay sheegto in ciidammo ka tirsan dowladda ay kufsadeen.
Dhamaan eedeysanayaasha ayaa iska fogeeyay dacwada lagu soo oogay, waxaana sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamay qareenada u doodaya eedeysanayaashan.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Wariye C/casiis Koronto laga yaabo in lagu xukumo Sadax Sano oo xarig ah, inkastoo qeyladhaanta beesha caalamka iyo ururada xaquuqda aadaha ay soo kordhayaan.